၁၀:၀၈၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ
၆၃၅၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
Reverted 1 edit by 111.84.195.86 (talk) to last revision by Ninjastrikers. (TW)
၁၆:၄၀၊ ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၀၈၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (Reverted 1 edit by 111.84.195.86 (talk) to last revision by Ninjastrikers. (TW))
| လူမျိုးများ =
| အမျိုးအစား = တစ်ပါတီစနစ်
| ခေါင်းဆောင်_ရာထူး(၁) = ထာဝရ သမ္မတ
| ခေါင်းဆောင်_အမည်(၁) = [[ကင်အီဆွန်း]]
| ခေါင်းဆောင်_ရာထူး(၂) = ဥက္ကဋ္ဌ
| ခေါင်းဆောင်_အမည်(၂) = [[ကင်ဂျုံအီ]]
| ထူထောင်ရေး_အမည်(၁) = လွတ်လပ်ရေးရခြင်း
ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ ခန့်မှခန့်မှန်းချက်အရ လူဦးရေမှာ ၃၄,၆၈ဝ,၆၄၄ ခန့်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ပြုံယမ်းမြို့
၁၉၆၉ ခုနှစ်ကလည်း အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်သည် မြောက်ကိုရီးယား လေပိုင်နက်ထဲသို့ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်သဖြင့် ပစ်ခတ်ရာမှ တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ် ချောက်ချားစေသည့် အရေးအခင်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
၁၉၇၁ ခု စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များက ဦးဆောင်၍ နှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးအတွက် စေ့စပ် ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ၁၉ ကြိမ် တိုင်သည်အထိ မပြေလည်ခဲ့ချေ။
ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံမှ အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းညွှန်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ ကင်ယန်ဂျိုးတို့ ပူးတွဲ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်သူအပေါင်းရှေ့၌ ကတိသစ္စာပြု၍ သစ္စာရှိ ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/279674" မှ ရယူရန်